Zimbabwean community in SA call urgent crime summit - The Zimbabwe Mail
HomeDiaspora NewsZimbabwean community in SA call urgent crime summit
Zimbabwean community in SA call urgent crime summit
January 24, 2020 Staff Reporter Diaspora News 0
The Zimbabwe Community in South Africa is organsing a crime summit in Berea, South Africa on the 6th of February 2020 after Zimbabwean nationals have been accused of killing one Detective Captain Oupa Matjie of the South African Police Services.
In a statement issued on Thursday, the organization said the Zimbabwean Community in South Africa distances itself against any crime being committed especially in areas such as Hilbrow, Yeoville and particularly Berea.
In the wake of the brutal murder of Detective Captain Oupa Matjie, we as the Zimbabwean Community in South Africa express our sincerest condolences to his family, to the SAPS and the South African nation at large.
As the Zimbabwe Community, we abhor and loathe criminals and would like to distance ourselves from any Zimbabwean nationals who commit crimes in South Africa and thus tarnish the good name of the majority of our countrymen who are hard working and earn their living honestly. The stiffest and harshest punishment must be meted out to those criminal elements who create environments of fear amongst the communities where Zimbabweans and South Africans live harmoniously with each other.
We implore the community not to see such disdainful conduct as representative of the Zimbabwean community but as acts of very few criminal elements in our community whom Zimbabweans are also daily victims of! Therefore whatever wrath must be directed at criminals via the law agencies instead of the ordinary Zimbabwean nationals.
A huge outcry has been raised where in Hilbrow, Yeoville and particularly Berea, some roads have become no-go areas and violent criminals are terrorising the community all day, robbing, stabbing and even with reports of deaths of our people.